Ampidiro: Codeless Mobile App Engagement Features | Martech Zone
Insert dia noforonina mba hahafahan'ny mpivarotra manao fampielezan-kevitra amin'ny finday fa tsy mila fampandrosoana ny finday. Ny sehatra dia manana karazan-dahatsoratra fampiroboroboana maro izay azo ampidirina, havaozina ary tantanana mora foana. Ny karazana endri-javatra dia namboarina ho an'ny mpivarotra sy ny ekipan'ny vokatra hahalavorary ny dian'ny mpampiasa, handrisika na oviana na oviana, hampitombo ny firosoana, ary handrefesana ary hamakafaka ny zava-bitan'ny fampiharana. Ny fampiharana dia zanatany amin'ny iOS sy Android.
Ny endri-javatra dia zaraina ho faritra valo miasa, ao anatin'izany ny Guide, Communicate, Refine, Convert, Engage, Acquire, Understand and Invent. Ireto manaraka ireto dia ny famaritana endri-javatra avy ao amin'ny Ampidiro ny Torolàlana momba ny vokatra.
Guide ny inserts dia manampy anao amin'ny fahombiazana amin'ireo mpampiasa vaovao ary hampiharihary ireo efa misy amin'ny endri-javatra sy fahaizana fanampiny.
App fitsangatsanganana - Manatsara ny traikefa fampiharana an'ny mpampiasa anao voalohany. Alao antoka fa takatr'izy ireo ny lanjan'ilay rindranasa amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo endrika manasongadina ny fampiharana amin'ny alàlan'ny carousel izay miseho rehefa manokatra ny fampiharana voalohany ny mpampiasa.
Asongadino ny faritra App - Tariho ny sain'ny mpampiasa amin'ny faritra fampiharana iray manokana amin'ny alàlan'ny “fanasongadinana” ity faritra ity amin'ny lahatsoratra manazava. Tsara ho an'ny onboarding, na handroahana fampiasana fampiasa vaovao.
Fitaovana finday - Manomeza fitaovana finday izay manazava ny bokotra na ny endri-javatra, miaraka amina lahatsoratra manondro an'io singa fampiharana manokana, endri-javatra na antso-to-hetsika.
Soso-kevitra App Feature - Amin'ny toe-javatra mety, manolora hevitra amin'ireo mpampiasa hampiasa fampiasa fampiharana manokana ary hitondra azy ireo mivantana amin'ny efijery fampiharana mifandraika amin'izany, amin'ny fampiasana rohy lalina.
Communications ny inserts dia mamorona resadresaka kendrena amin'ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fandefasana ny hafatra amin'ny fotoana mety, nateraky ny fampiasana manokana ny fampiharana, ny tantaran'ny mpampiasa na ny hetsika fampiharana amin'ny fotoana tena izy sy ny maro hafa, ary azo kendrena hampitombo ny fifandraisan'ny mpampiasa ilay hafatra.
Hafatra anaty fampiharana - Mampahafantatra ny mpampiasa ny hafatra ao anaty fampiharana ary afaka miaraka amina rohy na rohy lalandava, mitarika hetsika avy hatrany. Ny hafatra matetika dia misy sary sy bokotra fiantsoana hetsika izay mety hitarika ny mpampiasa hiditra amin'ny efijery fampiharana manokana.
Interstitial - Ny interstitial dia sary azo tsindriana amin'ny efijery feno izay ampandehanana eo anelanelan'ny efijery, aorian'ny efijery iray ary alohan'ny manaraka.
Hafatra horonantsary - Ireo mpampiasa dia tia horonantsary, ary ny hafatra an-tsary dia fomba iray tsara hampitana hafatra 'mampihetsi-po' na sarotra kokoa izay mihoatra ny fanamarihana fampahalalana mahazatra.
Banner - Tsy toy ny interstitial, ny sora-baventy dia sary azo tsindriana kely kokoa azo aseho amin'ny faritra samihafa amin'ny efijery. Amin'ny fampidirana sora-baventy ambany amin'ny app-nao, afaka mifampiresaka amin'ireo mpampiasa anao ianao nefa tsy manelingelina ny fampiasan'ny app azy, satria tsy manakana azy ireo tsy hampiasa ilay app ny banner.
Refine ahafahan'ny marika manova fanovana eo amin'ny fampiharana hampandehanana ny fifamatorana, amin'ny alàlan'ny fanovana ny lahatsoratra, ny sary na ny lohahevitra.
Manova lahatsoratra - Manana typoire na te-hizaha A / B safidy safidy soratra maromaro? Te-hanova lahatsoratra fampiharana ho an'ny fotoana manokana na fialantsasatra manokana? Te hanova lahatsoratra ve ianao raha vitan'ny mpampiasa ny hetsika iray natao tamin'ny fampiharana? Mariho ny lahatsoratra tianao hosoloina amin'ny efijery fampiharana, soloina amin'ny lahatsoratra vaovao dia afaka mandeha ianao.
Hanova ny sary - Hanova ny sary fampiharana hahitanao ny olan'ny fampiharana na hijerena izay sary mitarika fifandraisana tsara kokoa. Tsotra kely tsy misy kaody, na dia misy fanovana ataon'ny sary fotsiny aza amin'ny toe-javatra iray, mpihaino na fotoana iray manokana.
Modify Theme - Manova ny fampiharana hanome lohahevitra fizaran-taona, toy ny fialantsasatra na miverina any an-tsekoly.
fiovam-po Natsofoka mba hamoronana fikasana hividy ary hiantohana amin'ny fividianana tena izy. Mamorona fikasana hividy izy ireo, raha toa ka mampiasa ny fampahatsiahivana ny sarety dia afaka mamily ny mpampiasa hanohy ny fividianana izay nilaozana.
tapakila - Mba hampahafantarana ny mpividy mety ny zavatra atolotra sy ny antony tokony hividianan'izy ireo izao, dia azonao atao ny mampiseho tolotra azo ampiharina miaraka amin'ny tapakila. Ny fikitihana azy dia mitondra ny mpampiasa amin'ny efijery fampiharana mifandraika na manokatra browser.
Fampatsiahivana amin'ny sarety (tsindrio) - Raha mbola manana entana ao anaty saretiny ny mpampiasa dia asaivo miverina izy ireo ary mameno ny fividianana miaraka amin'ny fampandrenesana manokana izay misy rohy lalina amin'ny efijery sarety an'ny app.
Hafatra anaty fampiharana - amin'ny sisin-dahatsoratry ny mailaka fampiharana dia azo ampiasaina hampahatsiahivana ireo mpampiasa ny sarety fiantsin'izy ireo nilaozana amin'ny fotoana hanombohany ny fampiharana.
Page Landing - mamorona pejy fampandrenesana namboarina mora foana ao anatin'ny fampiharana azy ireo, hahazoana antoka fa tonga avy amin'ny fampandrenesana manokana ny doka, doka, haino aman-jery sosialy na mailaka mankamin'ny pejy fitokanana natao manokana izay hamboarina ho an'ny fiovam-po farany ambony.
Interstitial - Ny interstitial dia sary azo tsindriana amin'ny efijery feno izay ampandehanana eo anelanelan'ny efijery, aorian'ny efijery iray ary alohan'ny manaraka. Izy ireo dia mitarika ireo mpampiasa mankany amin'ny efijery fampiharana na pejin-tranonkala ary matetika ampiasaina hampitana fampahalalana mivaingana toy ny varotra, fampiroboroboana sns.
Engage - Kitiho ny fampidirana ary esory izy ireo, na dia misy aza ny workflows sarotra.
Ampidiro indray ireo mpampiasa natory - Avereno ampiasain'ny mpampiasa matory amin'ny alàlan'ny fanolorana fotoana manokana voafetra, hafatra kendrena ary maro hafa. Farito sy zarao ny mpampiasa natory ary kendreo ny tolotra samihafa ho an'ny fizarana tsirairay.
Tongasoa eto amin'ny mpisera Dormant - Farito izay mpampiasa herinao, mifototra amin'ny lamina fampiasany sy bebe kokoa, ary asehoy ny fankasitrahanao amin'ny tolotra manokana, fihenam-bidy, fidirana na fampiroboroboana.
Fanatsarana ny kinova - Mamorona hafatra fampandrenesana ao amin'ny app izay mampahafantatra ny mpampiasa ny fisian'ny kinova fampiharana vaovao, mampifandray azy io.
hahazo - Mampiditra ny fototry ny mpampiasa ny fampiharana amin'ny alàlan'ny naoty tsara kokoa na fampiroboroboana ny fampiharana fampiharana. Ity sokajy ity dia mitaky ny fananan'ny tompon'ny fampiharana andrana amin'ny fotoana mety, mba handraisan'ny mpampiasa tsikombakomba izay tsy hanelingelina ny fampiasany ilay fampiharana.
Santionany fampidirana faktiora - Ampiasao ity sisiny ity hanentanana ny mpampiasa hizara ny fampiharana na ny atiny ao amin'ny media sosialy.
Fampiroboroboana ny hazo fijaliana - Mampiroborobo ny fampiharana hafa amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo amin'ireo mpampiasa ny fampiharana.
Fampiharana fampiharana - Anontanio ireo mpampiasa ny naoty app amin'ny fotoana mety - rehefa niaina finday tsara izy ireo - ary tsy nanelingelina azy ireo. Manoro hevitra anao izahay hisafidy ireo mpampiasa herinaratra ao amin'ny app anao, satria mety hanome naoty ambony izy ireo.
Fantaro - Ny fahazoana ny valiny mety amin'ny fanontaniana momba ny safidin'ny mpampiasa, ny toetra mampiavaka azy na ny fanehoan-kevitrao dia singa iray lehibe amin'ny firotsahana fampiharana finday. Ity sokajy ity dia misy ny fanadihadiana, Analytics ary manohana inserts.
Ohatra iray momba ny Inserts - Mifandraisa amin'ireo mpampiasa anao hahazoana valiny tena izy amin'ny endri-javatra fampiharana vaovao, sanda fampiharana, safidinao manokana, ary lohahevitra hafa, amin'ny alàlan'ny fanadihadiana tokana.
Fanadihadiana marobe - Ny fanadihadiana iray misy fanontaniana maro dia azo aseho amin'ny efijery tokana na amin'ny slider.
Export amin'ny google analytics - Ity fampidirana ity dia ahafahanao manisy marika ny hetsika tianao harahina eo amin'ny efijery, amin'ny fampiasana ny tranokalanay ary anananao Analytics momba an'io hetsika io dia nalefa tamin'ny fotoana tena izy tamin'ny kaonty Google Analytics anao.
mamorona ahafahan'ny marika mamorona tsofoka manokana amin'ny alàlan'ny atiny HTML rehetra, mba haseho na aiza na aiza amin'ny app anao, miaraka amin'ny fahaiza-manao mitovy amin'ny fampidirana inserts ao anatin'ny tontolon'ny app, ny interface amin'ny mpampiasa ary ny kendrena amin'ny mpihaino sasany.
Tags: in-Appmarketing amin'ny-fampiharanafandefasan-kafatra anaty fampiharanahafatra finday anaty fampiharanaMampidirainterstitialfinday fampiharanaanalytics amin'ny findaytapakila fampiharana findaytamberina fampiharana findayfisongadinana ny fampiharana findayinterstitial fampiharana findaymarketing amin'ny findayfanatsarana ny fampiharana findayfamoahana fampiharana findayhafatra famporisihana ny findayrindrambaiko finday manome sosokevitra fanamarihanafanadihadiana amin'ny findayfitsapana ny fampiharana findayrindrambaiko fampiharana findayhafatra fanatsarana ny fampiharana findayfitsangatsanganana amin'ny fampiharana findayhafatra miarahaba ny fampiharana findayMobile Appstapakila findayinterstitial findayfandefasana horonantsary findayfanadihadiana ho an'ny fampiharana findaysehatra fanadihadiana ho an'ny fampiharana finday